Super Market Trader
Fish & Prawn Market
City * -- Please Choose -- Ah Thoke Ann Aunglan Aungpan Bago Bilin Bogale Chauk Chaw Sin Daik-U Dala Township Danubyu Darka Dawei Dedaye Demoso Einme Gangaw Gyobingauk Gyobingauk (ဓနသီဟ) Hakha Hinthada Hinthada (Bogale) Hinthada (Natmaw) Hinthada (Ta Lote Kone) Hlaing Thar Yar Hlaing Thar Yar Zone (1) Hlaing Thar Yar Zone (2) Hlaing Thar Yar Zone (3) Hlaing Thar Yar Zone (4) Hlaing Thar Yar Zone (5) Hlaing Thar Yar Zone (7) Hmawbi Hpa Yar Gyi Hpa-An Hpakant Hpruso Hsihseng Htantabin Inma Inn Ta Kaw Ka Nyut Kwin Kalay Kanbalu Kawhmu Township Kawkareik Khayan Township Kungyangon Township Kwin Kauk Kyaik Hto Kyaikkaw Kyaikkhami Kyaiklat Kyaikmayaw Kyainseikgyi Kyangin Kyaukpadaung Kyaukpyu Kyaukse Kyauktaga Kyauktan Township Kyaunggon Kyonpyaw Kyontani Lashio Latpadan (ThanZawKo) Latpadan Township Lewe Loikaw Loilem Madaya Magway Mandalay Maubin Mawgyun Mawlamyine Township Meiktila Minbu Mingaladon Minhla Moebyel Mogaung Moke Ta Ma Monywa Mudon Muse Mya Sein Yaung Myanaung Myaungmya Myeik Myingyan Myinmu Myitkyina Myohla Namsang Natogyi Nattalin Naungtayar Naypyitaw Nga Thaing Chaung Ngape Ngwe Pin Lal Nyaung Lay Pin Nyaung-U Nyaungdon Nyaungyan Oak Pho Oakkan Township Pakokku Pantanaw Pathein Pauk Paung Paungde Township Pekon Phyu Pindaya Pinlaung Pinlon Pwint Phyu Pyapon Pyawbwe Pyawbwe (Meiktila - Shwe Taung Pan) Pyawbwe (YarZar) Pyay Pyin Oo Lwin Pyinmana Sagaing Salin Sar Ma Lout Shwe Lin Ban Shwe Taung Township Shwebo Shwegyin Shwenyaung Shwepyitha Sint Kine Swar Taikkyi Township Tatkon Taungdwingyi Taungdwingyi (Myothit) Taunggyi Taungoo Taungtha Thaketa Than Phyu Zayat Township Thanatpin Thandwe Township Thanlyin Township Thar Paung Tharyarwaddi Township Thaton Thayat Chaung Thayet Thazi Thegon Theinzayat Thilawa Thone Sal Township Thonegwa Township Tikyit Toungup Twantay Wartayar Watpoke Waw Wundwin Yamethin Yanaung Yangon Yay (Chaung Taung) Yay (Setse) Yay (Win) Yay Township Yedashe Yedashe (Myo Hla) Yenangyaung Zalun Zayat Kwin Zigon သာစည်
Choose Account Type *
Borrowing DDPC Microfinance Service
ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များသည် First AI Myanmar မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော Starfish Application ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Starfish Application အား အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် ဖော်ပြထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို လက်ခံသဘောတူထားသည်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
1. Application Visitor
Starfish Application အား Account Registration မပြုလုပ်ဘဲ Visitor အနေဖြင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုသူများနေဖြင့် Starfish Application မှ Pubic ဖော်ပြထားသော Information များအားလုံးကို ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ လူကြီးမင်းမှ Starfish App တွင် ပါရှိသော ဝယ်ယူ/ရောင်းချနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုလိုပါက Account Registration ပြုလုပ်ရပါမည်။
2. Registration ပြုလုပ်ခြင်း
2.1 အသက် (၁၈) နှစ် အထက်ရှိမည်သူမဆို Starfish Application တွင် Account Registration ပြုလုပ်နိုင်ပါသည််။
2.2 Registration ပြုလုပ်ရာတွင် ပထမဦးစွာမိမိဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် Registration ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် မိမိအားလပ်ချိန်တွင် application ရှိ My profile တွင် အချက်အလက်များပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ အချက်အလက်များတောင်းခံရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွနိုပ်တို့ အနေဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ အကောင့် အချက်အလက်များ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အကောင့်ပိတ်လိုသည့်အခါမျိုး တွင် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုသည့်အခါ လိုအပ်သည့်အပြင် လူကြီးမင်းတို့၏ သုံးစွဲမှု အပေါ်မူတည်၍ ကျွနိုပ်တို့ဘက်မှ မေတ္တာ လက်ဆောင်များ ပြန်လည်ပေးအပ်သည့် အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် အတွက် အချက်အလက်များတောင်းယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။
2.3 လူကြီးမင်းအသုံးပြုသော ဖုန်းနံပါတ်မှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော (သို့) ဆက်သွယ်၍ရသော ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ရပါမည်။
2.4 Starfish Application တွင် ထည့်ထားသော လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များမှာ မှန်ကန်တိကျပြီး ပြည့်စုံမှု့ရှိရပါမည်။
2.5 Registration ပြုလုပ်ရာတွင် ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် Password or PIN (Personal Identification Number) ကိုသတ်မှတ်ခိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်း Password or PIN နံပါတ် အား လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားမှသာ လူကြီးမင်း၏ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ လုံခြုံမှု ရှိပါမည်။ လူကြီးမင်း၏ Account အား အခြားသူတစ်ဦးဦး သုံးစွဲနေသည်ဟု သံသယရှိပါက ကျွနိုပ်တို့ကိုချက်ချင်း အကြောင်းကြား ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
2.6 Starfish Application ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် First AI Myanmar ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ ၊ Service များနှင့် ပတ်သတ်သောကြော်ငြာများ၊ လက်ကမ်းစာဆောင်များ ၊ နေ့စဉ်ဘဝအတွက် အကျိုးရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
2.7 ဤယခုဖော်ပြထားသော စည်းကမ်းချက်များအပြင် အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်တွင် ပါရှိသော စည်းကမ်းချက်များကိုပါ ဝယ်ယူသူမှ ဖတ်ရှု့နားလည် သဘောပေါက်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ကုမ္ပဏီဘက်မှ မှတ်ယူပါသည်။
3. Account နှင့် သက်ဆိုင်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
3.1 Application ၏ User Account သည် User များ၏ ကိုယ်ပိုင် ဖုန်းနံပါတ် ဖြင့် ဖွင့်ထားသော Account များ ဖြစ်သည့်အတွက် ဖုန်းပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) Sim Card ပျောက်ဆုံးမှုများ ဖြစ်၍ ဖုန်းနံပါတ် လဲလှယ်မည်ဆိုပါ လူကြီးမင်းတို့၏ မှတ်တမ်းများ ပြန်လည်ရရှိနိုင်ရန် Customer Service သို့ ဆက်သွယ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
3.2 Customer Service မှ လူကြီးမင်း ၏ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုသည့် အချိန်တွင် လူကြီးမင်းဘက်မှ အချက်အလက်များ ပေးအပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ လူကြီးမင်း Account ပြန်လည် ဖွင့်ပေးရန် အတည်ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
3.3 လူကြီးမင်းမှ Account ဖျက်သိမ်းမိပါက မိမိ၏ ဝယ်ယူ / ရောင်းချ မှတ်တမ်းများ ပျောက်ဆုံးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
3.4 လူကြီးမင်း၏ Account အား အခြားသူတစ်ဦးဦး သို့ လွှဲပြောင်းပေးခွင့်မရှိပါ။
4. Point ရရှိခြင်း (အမှတ်ရရှိခြင်း) နှင့် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်း
4.1 ဤ Application အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေမှုများအတွက် Point (အမှတ်) ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
4.2 Wholesales ဝယ်ယူမှုများအတွက် ငွေပေးချေပြီးကြောင်း အတည်ပြုသည့်အခါ System မှ လူကြီးမင်း ရရှိမည့် Point အား အလိုအလျောက် ထည့်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
4.3 ရရှိသည့် Point များအား Starfish Application ရှိ မည်သည့် ကုန်ပစ္စည်းကို ဖြစ်စေ ၎င်း Point များအသုံးပြု၍ ပြန်လည် ဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး Point ဖြင့် ဝယ်ယူသည့်အခါတိုင်း ထပ်ဆောင်း Discount များ ခံစားခွင့် ရှိပါသည်။
4.4 ရရှိထားသော အမှတ်များအား Online Sales (or) Application သုံး၍ ဝယ်ယူငွေပေးချေသည့်အခါသာ သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး Point အမှတ်များအား ငွေသား ပြန်လည် ထုတ်ယူ၍ မရပါ။
4.4 လူကြီးမင်း ရရှိထားသော Point များအား အခြားသူတစ်ဦးဦး သို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုပါက ID ဖြင့် ဖြစ်စေ QR code Scan ဖတ်၍ ဖြစ်စေ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ လွှဲပြောင်းပေးရာတွင် လူကြီးမင်း၏ Account တွင် ရှိသည့် ပမာဏသာ လွှဲပြောင်းနိုင်မည်။
4.4 ရရှိလာသည့် Point များသည် ရရှိသည့် နေ့ မှ တစ်နှစ်အတွင်း သုံးစွဲရန် အကျုံးဝင်မည် ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ကျော်သွားလျှင် expired ဖြစ်မည်။
5. ငွေပေးချေခြင်း ၊ ငွေပေးသွင်းရန် နောက်ကျခြင်း နှင့် ရက်လွန်ကြေး
5.1 လူကြီးမင်းတို့ ဝယ်ယူသည့် ကုန်ပစ္စည်း အမှာ အတွက် ငွေပေးသွင်းရန် Due Date & Time (နောက်ဆုံးပေးသွင်းရမည့် ရက် နှင့် အချိန်) အား ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာအသေးစိတ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
5.2 Cash Down ဝယ်ယူသည့် (Prepay) Customer များသည် မိမိ ဝယ်ယူသည့် အမှာလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချိန်အတွင်း ငွေပေးသွင်းမှု မရှိလျှင် အလိုအလျောက် Order Cancel ဖြစ်သွားပါမည်။
5.3 Cash Down (postpaid) နှင့် Credit ဝယ်ယူခွင့် ရရှိထားသည့် Customer များသည် မိမိ ဝယ်ယူသည့် အမှာလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချိန်အတွင်း ငွေပေးချေခြင်းမရှိပါက နောက်ကျရက်လွန်ကြေးများကို Starfish Application မှ သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းအတိုင်း လက်ခံပေးချေရပါမည်။
5.4 ညနေ ၅ နာရီနောက်ပိုင်း Orders များအား Pay By Point နဲ့ Pay With Deposit စသည့် Payment Method ဖြင့်သာ ဝယ်ယူ၍ ရပါမည်။
6. Deposit ငွေကြိုသွင်းခြင်း နှင့် ခံစားခွင့်
6.1 Starfish Application မှ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် Deposit ကြိုသွင်းထားနိုင်သည်။
6.2 စက်သုံးဆီပေးသွင်းငွေသည် ဝယ်ယူသည့် တန်ဖိုးထက် ပို၍ ပေးသွင်းမိလျှင် လူကြီးမင်း၏ Deposit Account တွင် ထားရှိပေးထားပါမည်။
6.2 ကြိုသွင်းထားသည့် Deposit များ၏ လက်ကျန် Deposit ငွေအပေါ်တွင် Point များ နေ့စဉ်အလိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ပြန်လည်ရရှိပါမည်။
7. လူကြီးမင်းများ၏ ဝယ်ယူထားသည့် ကုန်ပစ္စည်း များ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း ထုတ်ယူခြင်း မရှိပါက လက်ကျန်အရေအတွက်ပေါ်တွင် သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း သိုလှောင်ခ ပေးချေရပါမည်။
8. Petrol Station Sales Service ဝန်ဆောင်မှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
8.1 Petrol Stations Sales service ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုမည့် လူကြီးမင်းသည် Starfish App တွင် Register လုပ်ထားရပါမည်။
8.2 Petrol Stations Sales Servise တွင် Order တင်ထားပါက Order တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချိန်အတွင်း ဆီလာရောက်ထုတ်ယူရပါမည်။
8.3 လူကြီးမင်း၏ ငွေပေးချေရန်ရွေးချယ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း (Payment Method) လူကြီးမင်း၏ Account များမှ အလိုအလျောက် စာရင်းပြောင်း ပါလိမ့်မည််။
8.4 ငွေသားဖြင့် ပေးချေ ဝယ်ယူသည့်စနစ် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိပါ။
8.5 Petrol Stations Sales service အားအသုံးပြုနိုင်ရန် လူကြီးမင်းသည် လူကြီးမင်း၏ Account ထဲသို့ ကြိုတင်ပေးငွေ (Deposit) ထည့်သွင်းထားရမည်။
8.6 Petrol Stations Sales သုံးစွဲခြင်းအတွက် လူကြီးမင်းရရှိထားသည့် Member အလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် Point များ ရရှိပါမည််။
8.7 Point များအသုံးပြုသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် အပိုဒ် (4) တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
8.8 ငွေပေးချေခြင်း ၊ ငွေပေးသွင်းရန် နောက်ကျခြင်း နှင့် ရက်လွန်ကြေး များသည် အပိုဒ် (5) တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
8.9 Deposit ငွေကြိုသွင်းခြင်း နှင့် ခံစားခွင့် အပိုဒ် (6) တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
PAYMENT SERVICE ၏ ဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
အောက်ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် PAYMENT SERVICE ၏ ဝန်ဆောင်မှု များအား အသုံးပြုသည့် သုံးစွဲသူလူကြီးမင်းများ သဘောတူလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ဖြစ်သည်။
PAYMENT SERVICE ၏ ဝန်ဆောင်မှုအား သုံးစွဲရန် Register မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်ပါက အောက်ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီပြီး ဖြစ်ပါသည်။
1. Starfish Account ရှိသူများ အားလုံး PAYMENT SERVICE ၏ ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုနိုင်ပြီး Starfish Account မရှိသူလူကြီးမင်းများသည် REGISTER FORM အချက်အလက်များ ဖြည့်၍ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းခြင်း အောင်မြင်ပါက PAYMENT SERVICE ၏ ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုအား စတင် အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
2. မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ဖြည့်ရသော လူကြီးမင်း ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားသော KYC လိုအပ်ချက်အလုံးစုံ ကို တောင်းခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
3. မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် လျို့ဝှက်နံပါတ် Password ကိုသတ်မှတ်ခိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်း Password နံပါတ် အား လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားမှသာ လူကြီးမင်း၏ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ လုံခြုံမှု ရှိပါမည်။
4. မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သုံးစွဲသူလူကြီးမင်း၏ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ မိုဘိုင်းဆင်းကဒ် ဖြင့်သာ လူကြီးမင်း၏ အကောင့်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည် ဖြစ်သည်။
5. မှတ်ပုံတင် စာရင်းသွင်းခြင်း အောင်မြင်သည် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုနိုင်ရန် အကောင့်စာရင်း ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော Level ရှိ ငွေပမာဏအတိုင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
1. သုံးစွဲသူသည် မိမိ၏ ငွေကြေးအကောင့်အား အခြားသူ တစ်ဦးဦးထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းမပြုရ။
2. မိုဘိုင်း နံပါတ်တစ်ခုလျှင် Account တစ်ခုသာ ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။
3. သုံးစွဲသူ ၏ account ၏ လျှို့ဝှက် နံပါတ်အား အခြားသူ တစ်ဦးဦးသို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် ပြုလုပ်စဉ် ရရှိလာသော တစ်ခါသုံးလျှို့ဝှက်ကုဒ်နံပါတ်များကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။
4. သုံးစွဲသူ ၏ ဖုန်း (သို့) Sim Card ပျောက်ဆုံးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက သုံးစွဲသူ ၏ Account အား ပိတ်ပစ်နိင်ရန် (သို့) နံပါတ်အသစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် CUSTOMER SERVICE သို့ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပေးရမည်။
သုံးစွဲသူမှ မိမိအကောင့်ထဲသို့ ငွေထည့်သွင်းလိုခြင်း
1. သုံးစွဲသူ အကောင့်ထဲသို့ ငွေထည့်သွင်းလိုပါက PAYMENT SERVICE ၏ ဘဏ် အကောင့်ထဲ့သို့ ငွေသွင်းကာ Payslip တင်၍ ငွေထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
2. နီးစပ်ရာ အေးဂျင့် ဆိုင်များသို့ သွားရောက်၍ ဖြစ်စေ Account ထဲသို့ ငွေထည့်သွင်းနိုင်သည်။
အကောင့်ထဲမှ ငွေအား ထုတ်ယူလိုခြင်း
1. သုံးစွဲသူ သည် မိမိ အကောင့်ထဲမှ ငွေ အား ထုတ်ယူလိုပါက နီးစပ်ရာ အေးဂျင့် ဆိုင်များသို့ သွားရောက်၍ PAYMENT SERVICE Account ထဲ မှ ငွေအား ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
1. သုံးစွဲသူ တစ်ဦးမှ အခြား PAYMENT SERVICE Account သုံးစွဲသူ ထံ အချင်းချင်း ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
1. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် PAYMENT SERVICE မှ သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားများအတိုင်း အခကြေးငွေ ပေးချေရမည်။
2. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အခကြေးငွေများသည် PAYMENT SERVICE မှ တရားဝင် သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားများအတိုင်းသာ ပေးချေရမည် ဖြစ်ပြီး အခကြေးငွေများအား PAYMENT SERVICE မှ အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခွင့် ရှိသည်။
Shipment Quota Order
1. Shipment Quota Order များအား Loading Date ၁၀ ရက်အလိုတွင် Cancel/Edit လုပ်ခွင့်မရတော့ပါ။
Terminal : No(1/2 - B), Thilawa Port, KyaukTan Tsp, Yangon.
Copyright © 2019 - 2021. All rights reserved by Starfish Myanmar. Powered By First AI Myanmar.